Faahfaahin: Rag ku labisan tuutaha ciidamada Puntland oo lagu gawracay gobolka Bari – SBC
Faahfaahin: Rag ku labisan tuutaha ciidamada Puntland oo lagu gawracay gobolka Bari
Meydka laba nin oo xiran tuutaha ciidamada Puntland ayaa la soo sheegayaa in saaka lagu arkey inta u dhaxaysa tuulooyinka Yalho & Laag oo ku yaal duleedka magaalada Boosaaso.
Labada nin ayaa surka laga jaray ama la gawracay ayaa waxaa la soo dhigay wadada Laamiga, kuwaasi oo madaxooda la dulsaaray jirka intiisa kale.
Dadka socotada ah ee ku safrayey wadada Laamiga ee isku xirta magaalooyinka Boosaaso & Qardho ayaa soo sheegaya in meydkaasi uu u muuqdey mid la soo dhigay goobtaasi habeenimadii xaley, isla markaana dhiiga wali ka soo hooraya meelaha laga gawracay uu ahaa mid cusub taasi oo u muuqanaysa in ay aheyd fal saacado ka hor la fuliyey xiligaasi goobtaasi la soo dhigay labadan nin meydkooda.
Jaamac Ismaaciil oo isagu saaka safar ku soo marey wadada Laamiga ayaa u sheegay SBC in uu indhihiisa ku soo arkey meydadka balse aan la aqoonsan karin maadama wajiyada labada nin si xun uu ugu qubtey dhiig oo uu ku qalalay,
Dadweyne fara badan oo isaga kala yimid deegaanada meydka lagu arkay ayaa dhoobnaa halka meydadka la soo dhigay waxaana ka muuqatey wajiyadooda dareen kacsan & argagax, iyagoo la yaabanaa talaabadan.
Maxamuud Cali oo 60 sano jir ah oo deegaankaasi ku dhaqanaa sida uu sheegay mudo ka badan 40 sano ayaa sheegay in aanu waligiis maqal ama arag dhacdo caynkan oo kale ah oo ka dhacda deegaanadaasi, waxaana uu sheegay in ilaa iyo haatan aan la aqoonsan raggan.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka maamulka gobolka Bari ama maamulka dhexe ee Puntland oo ku aadan falkan gawraca ah.
Warar aan si buuxda loo xaqiijin ayaa sheegaya in raggan la gawracay ay ka mid ahaayeen maxaabiis ka tirseyd ciidamada Puntland oo ay ku qabsadeen dagaalkii ugu dambeeyey ee Galgala ka dhacay xoogaga daacada u ah Sheekh Maxamed Siciid (Atama) oo si weyn uga soo horjeeda ciidamada Puntland, laakiin ma jiro wax war ah oo arintaasi uu kaga hadley ninkaasi oo uu ku xaqiijinayo.
inaalilaahi waa inaa ilahi raajicuun
waa wax laga xumaado aman xumada ku siikordhay sa puntilan oo lagu yiqiin aman buuxa hadaba maxaa sababay waxan foosha xun ee waa yahan dan be ku sookordhay puntilan oo lala begsanayo dadka wax ku oolka ah ee kudhaqan mandaqada puntilan sideebay wax u socdaan gobolo waalahaystaa askartii waa lagowracayaaa afxumada faroole waa jogto colaada beeluhu waa siikordhaysaa sidii 1994
walaalayaal waxaas waan sugaaynay oo dadka PIS tu laynayso waa loo argudayaa intaas kaliyana kuma ekaanayso ee waxay imaanaysaa nin walba oo dawladan mijrimka ah u shaqeeya in dhagta dhiiga loo daro
axmed siciid maxamed mr gedo says:
waad salaamantihhn dhamaan akhristayaasha culays kasta fudayd ayaaa ka danbeeeya insha.alaaah nabad iyo baraaare ayaaan ku jirnaaa ilaahey hanoo siyaadiyo xaasidkana alaha naga qabto aaaamiiin